Ny PC dia tsy manaiky ny Android, inona no ataoko? | Androidsis
Na dia Android no rafitra miasa finday be mpampiasa indrindra ny planeta (misy amin'ny finday avo lenta mihoatra ny folo amin'ny finday avo lenta), ary na dia nivoatra tamin'ny fomba tena miavaka aza izy hatramin'ny niandohany ka hatramin'ny kinova ankehitriny izay efa ankafizin'ny maro aminareo, ny marina dia misy mbola bibikely (ary mbola hisy ihany, satria tsy misy na inona na inona amin'ny fiainana tonga lafatra tanteraka), indrindra rehefa manandrana mampifandray fitaovana Android amin'ny solosaina.
Misy fotoana rehefa ny solosaina dia tsy mahita ny finday nifandray izahay. Ny antony sy ny anton'izany dia mety ho maro, manomboka amin'ny izay toa sarotra kokoa amintsika ka hatramin'ny zavatra tsy misy dikany, tsy fahombiazan'ny kapila, lesoka ao amin'ny fitaovana, safidy tsy nampiasaintsika ... Fa noho ny antony maro, mbola ilaina ny mampifandray ny telefaona amin'ny solosaina arakaraka ny lahasa, ary mba tsy ho kivy ianao amin'ny fanandramana, anio dia hiezaka izahay handinika ny antony lehibe mahatonga ny PC tsy hanaiky ny finday, sy ny vahaolana mety hitranga. Vonona ve ianao?
1 Andao hojerentsika ny fitaovana
2 Mpamily, ireo atahoranao
3 Ny làlana tsara foana
4 Toa adaladala nefa ...
5 Famerenana amin'ny laoniny tanteraka
Andao hojerentsika ny fitaovana
Andao atomboka amin'ny iray izay matetika antony iray mahazatra: olan'ny fitaovana. Olana iray mahazatra izany rehefa mahita fitaovana tena "mijaly" na efa taona vitsivitsy isika, ary farafaharatsiny, efa antitra ara-teknolojia. Rehefa miresaka olana momba ny fitaovana isika dia samy miresaka amin'ny telefaona finday ihany, na koa ny mpampitohy na ny tariby fifandraisana aza.
Tsotra ny vahaolana ary mandalo amin'ny fanandramana ireo fitaovana ireo, izany hoe, zahao fa mandeha tsara ny telefaona Android, zahao raha tsy simba ny mpampitohy terminal, zahao fa mandeha tsara ny tariby ary tonga amin'ny telefaona ny herinaratra… Indraindray ny vahaolana dia mety ho tsotra toy ny fanandramana tariby hafa.
Mpamily, ireo atahoranao
Ary na dia olana lehibe aza ny olana momba ny fitaovana, tsy misy isalasalana ny olana amin'ireo mpamily dia mandray ny mofomamy rehefa tsy hitan'ny solosaina ilay finday. Ry mpamily!
Ny mpamily no mpanara-maso, izany hoe, izy ireo indrindra no mamela, rehefa mampifandray ny findainao Android amin'ny solosaina ianao dia hitany ary avelany hanao izay kasainy hatao, ohatra, mamindra mozika amin'ny PC mankany amin'ny telefaona . Ary koa, misaotra an'i mpamily Azonao atao ihany koa ny manandrana kinova Android vaovao amin'ny alàlan'ny fanovana ny ROM, ka io dia lafiny iray tena lehibe manarona ireo mpampiasa an-trano sy ny mpamorona.
Raha tsy fantatry ny PC ny findaiko dia azo inoana fa izany tsy manana ny mpamily ilaina hametrahana izany amin'ny solosainao, na dia marina aza fa, amin'ny telefaona finday "tsy dia feno" dia tsy mila rindrambaiko fanampiny ianao. Miova ny toe-javatra rehefa miresaka momba ny marika toa ny Samsung sy ny hafa misy ifandraisany.
Amin'ireny tranga ireny, ny marina dia tsy tokony hanana olana ihany koa ianao, satria io finday io ihany no tompon'andraikitra amin'ny fametrahana ny rindrambaiko ilaina rehefa mampifandray azy amin'ny PC ianao, saingy, araka ny efa nianarantsika tany am-piandohana, tsy misy lafatra izay mety tsy hahomby. Rehefa tsy tsikaritry ny solosaina ny finday dia tadiavo fotsiny ireo mpamily Google ho an'ny maodelin'ny telefaonanao ary ho hitanao haingana izy ireo ary ho afaka hametraka azy ireo. Ohatra, Mpamily Samsung eto isika izao.
Raha te-hametraka sy hizaha toetra ROM manokana ianao na te hanongotra ny fitaovanao, apetraho ny rindrambaiko fandaharana mpamorona Android Studio na ny programa 15 segondra ADB Installer ahafahanao misintona ireo mpamily rehetra ilainao.
Ary miresaka momba ny mpamily, azonao atao koa ny manandrana izao manaraka izao amin'ny solosainao:
Mandehana any amin'ny My Computer, tsindrio havanana ary safidio ireo fananana.
Tsindrio ny hardware ao amin'ny menio izay hiseho
Tsindrio Device Manager.
Ary rehefa miseho ny lisitra iray dia safidio ny Controller Universal Serial BUS (BUS)
Tsindrio tsara izao ary ampidiro ny safidy "Contrôleur host host"
raha sanatria kilemaina izany.
Ny làlana tsara foana
Matetika no lazaina fa misy fomba marina foana anaovana zavatra ary, ahoana no hitrangany raha tsy izany, ny Android-nao dia tokony ho amin'ny fomba marina rehefa mampifandray azy ireo amin'ny solosaina isika Mba hahafahany mamantatra azy io ary afaka miara-miasa aminy isika, mendrika ny redundancy, tsara.
Rehefa mampifandray ny finday Android-nao amin'ny PC ianao dia misy fomba telo azo atao ka tsy maintsy misafidy ilay mety ianao:
Mamindra rakitra. Araka ny asehony dia io no fomba ahafahanao mamindra rakitra avy amin'ny Android mankany amin'ny PC satria manome alalana ny solosaina hiditra amin'ireo rakitra ao amin'ny findainao.
Alefaso ity fitaovana ity Mamela anao hameno ny findainao amin'ny fiainana sy ny angovo fotsiny ihany izy io, saingy tsy ho vitanao ny mitantana karazana rakitra.
Famindrana sary (PTP), dia ny maody ahafahanao mitantana ny sarinao, ary ny sarinao ihany.
Ary mazava ho azy aza adino zahao ny safidy «USB debugging» ao amin'ilay faritra «Safidy fampandrosoana» Amin'ny tranga sasany, mety ho io no antony tsy ahitan'ny solosaina finday.
Raha tsy hitanao io safidy io dia ataovy izao manaraka izao: mandehana any amin'ny "Settings" → "About device" ary tsindrio imbetsaka amin'ny "numéro Build". Io dia ahafahan'ny "Safidy fampandrosoana".
Toa adaladala nefa ...
Angamba, alohan'ny hanaovana fanamarinana hafa ankoatr'ireo efa noresahinay dia tokony andramo avereno ny telefaona finday. Fantatro fa toa vahaolana tsotra izany ary miverimberina loatra. Na dia maheno teknisianina manam-pahaizana milaza izany aza isika, dia afaka nieritreritra «ary ho an'ireto no efa nianaranao?». Fa ny tena izy dia Ho gaga ianao fa impiry ny mamerina ny terminal no vahaolana rehefa tsy fantatry ny PC ny findaiko, ary na eo aza ireo lesoka maro hafa mety hitranga. Tadidio: "Ny famerenana amin'ny laoniny ny fotoana dia hanaisotra ny hadalana hiala ny findainao"? Mba hanaovana izany dia tsindrio fotsiny ary tazomy ny bokotra Power / Sleep mandra-pisehoan'ny safidy eo amin'ny efijery. Safidio izany ary andraso.
Famerenana amin'ny laoniny tanteraka
Indraindray ilaina ny fepetra henjana. Raha tsy misy ny voalaza etsy ambony dia niasa, ary raha mbola tsy mifandray amin'ny PC ny findainao Android dia tokony avereno ny smartphone, izany hoe hamafa tanteraka ny ao anatiny rehetra (sary, horonan-tsary, fampiharana, fifandraisana sns) ary avelao ho aotra, toy ny andro nanesoranao azy voalohany tao anaty boaty voalohany.
Indraindray, ity fepetra "lozabe" ity ihany no vahaolana, indrindra raha momba ny fitaovana taloha, miaraka amin'ny fampiasana betsaka, izay mitarika olana ao anatiny. Angamba, amin'ny fanatanterahana ny famerenana amin'ny laoniny, tsy ny tsy fahombiazan'ny finday tsy mampifandray amin'ny PC ihany no ahitsy, fa ho hitanao ihany koa fa miasa be kokoa izy io, ary manana toerana fitahirizana malalaka bebe kokoa ianao.
Mazava ho azy, alohan'ny hamerenana amin'ny laoniny, aza adino ny manao backup amin'ny tahirin-kevitra sy rakitrao rehetra.
Manantena aho fa ny vahaolana aroso amin'ity lahatsoratra ity, manomboka amin'ny famerenana amin'ny laoniny ka hatramin'ny famerenana amin'ny laoniny, dia hahasoa anao raha toa ka tsy takatry ny solosainao ny finday Android-nao. Raha tsy izany dia tokony mbola dinihinao ihany hoe tonga ny fotoana hanavaozana ny terminal anao.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » Tutorials » Ny PC dia tsy manaiky ny Android, inona no ataoko?
Fampitahana BQ Aquaris E10 vs BQ Edison 3